You Tube farany nahazo ny fanavaozana ny Material Design | Androidsis
Efa hatry ny ela isika mizara aminareo rehetra ny rindranasa Google nohavaozina tamin'ny kinova farany tamin'ny famolavolana Material Design de Android 5.0 Lollipop, fampiharana sasany mamela antsika hizaha toetra ny Android Lollipop, ela be alohan'ny hanavaozana ny terminal antsika amin'ity kinova manaitra sy nohatsaraina ity an'ny rafitra fiasan'ny Andy.
Tamin'ity indray mitoraka ity dia iray tamin'ny ny fampiharana teratany an'ny Mountain View izay azo antoka fa ny mpampiasa maro no niandry ny fanavaozana an'io interface interface amin'ny sary miaraka amina layout Design Material toy ny fampiharana toa Gmail, Chrome, Hangouts, sns sns. Ny fampiharana andrasana indrindra izay mahazo ny fatra nandrasana hatry ny ela an'ny Material Design dia tsy iza fa ny You Tube ho an'ny Android izay miseho mahatalanjona ankehitriny miaraka amin'ny fanovana sary maro sy loko miloko ary mazava kokoa noho ny teo aloha.
Ny fiheverana voalohany hanananao rehefa miditra an'ity kinova You Tube ho an'ny Android ity ianao, farafaharatsiny raha sendra tianao izany dia ny nanaovanao ny fampiharana diso hatramin'ny fomba sary toa ny karatra Google Now, mahatonga antsika hieritreritra na hahatadidy fa mizaha ny tambajotra sosialy Mountain View Google Plus izahay. Fihetseham-po izay lasa somary hafahafa tamin'ny voalohany, saingy ao anatin'ny minitra vitsy dia hadinontsika tanteraka ary afaka hankafizantsika ny hatsarana rehetra, ny fahatsorana ary ny fiasa omen'izy ireo anay. Fampiharana Google miaraka amin'ity fomba Design Material ity fa tiako be ilay izy.
Ho fanampin'ny fiovana hita maso sy sary rehetra momba ny interface an'ny mpampiasa, You Tube ho an'ny Android amin'ity fanavaozana farany ity dia nahazo fanatsarana toa ny sasany ihany koa izy mandroso sy mihatsara kokoa ny sivana fikarohana Na ahoana no mety hisy raha tsy izany, ny fanavaozana ny kisary fampiharana miaraka amin'ity famolavolana fisaka vaovao ity izay efa hita sahala amin'ireo sary famantarana ireo fampiharana Google teo aloha, nohavaozina tamin'ny famolavolana Material Design an'ny Android 5.0 Lollipop.
Mametraka azy amin'ny terminal Android mifanentana aminao alohan'ny handraisana ny fanavaozana ofisialy avy amin'ny Play Store an'ny Google, fivarotana fampiharana ofisialy ho an'ny Android, mila tsindrio fotsiny ity rohy ity mba hampidina ny APK mivantana ary hametrahana azy amin'ny tanana. Na dia teo aza ny tsy maintsy namelanao ny fampiasa Android, ny safidy ao anatiny fiarovana afaka mametraka fampiharana avy amin'ny loharano tsy fantatra.
Misintona - apk You Tube Material Design, fitaratra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » apk » [APK] You Tube mahazo ny anjarany amin'ny Material Design